अध्याय ५० | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
सबै मण्डलीहरू र सबै सन्तहरूले विगतको कुरा याद गर्नुको साथै भविष्यलाई पनि हेर्नुपर्छ: विगतका तेरा कति वटा कार्यहरू योग्य थिए, अनि तीमध्ये कति वटा राज्यको निर्माणमा सहभागी थिए? आफैलाई चलाक नठान्! तैँले तेरा आफ्नै कमी कमजोरीहरूलाई स्पष्ट प्रकारले देख्नुपर्छ, अनि तैँले तेरो आफ्नै अवस्थालाई बुझ्नुपर्छ। तिमीहरूमध्ये कोही पनि यस सम्बन्धमा कुनै प्रयास गर्न वा केही समय खर्च गर्न इच्छुक छैनौ भन्‍ने म जान्दछु, त्यसैले तिमीहरूले कुनै उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सक्दैनौ। तिमीहरू आफ्नो सबै समय खान, पिउन र रमाइलो गर्नमा नै खेर फाल्छौ। जब तिमीहरूमध्ये केही भेला हुन्छौ, तब जीवनका आत्मिक विषयहरूमा सङ्गति गर्ने कार्यमा वा एक-अर्कालाई जीवन प्रदान गर्ने कार्यमा कुनै ध्यान नदिई तिमीहरू ख्यालठट्टा गर्छौ। तिमीहरू कुरा गर्दा तिमीहरू हाँसेको वा ठट्टा गरेको म सहन सक्दिनँ, तापनि तिमीहरू कति हास्यास्पद छौ। मैले धेरै पल्ट भनेको छु, तर तिमीहरूलाई मैले भनेको कुराको अर्थ थाहा छैन—के यो तेरो आँखाकै सामने रहेको स्पष्ट कुरा होइन र? मैले यस्तो कुराहरू पहिले पनि भनेको छु, तापनि तिमीहरू अझै पनि विश्‍वस्त भएका छैनौ र मैले तिमीहरूलाई गलत बुझेको छु, मैले भनेको कुरा वास्तविक छैन भन्ने सोचेर तिमीहरूले मैले भनेको कुरालाई स्वीकार गर्दैनौ। कि मामला यो होइन भन्‍ने हुनसक्छ?
यदि तिमीहरू मसित झारा टार्ने काम गर्छौ भने, म तिमीहरूलाई एकातिर पन्साइदिनेछु। तैँले फेरि लापरवाह हुने साहस त गर्! तैँले बेपरवाह र असावधान हुने साहस त गर्! मेरा वचनहरू कुँद्ने चक्कु हो; मेरो इच्छाअनुरूप नहुने कुनै पनि कुरालाई यस चक्कुद्वारा काटेर फ्याँकिनेछ, अनि तैँले आफ्नै आत्म-सम्‍मानको निम्ति धेरै विचार गर्नु आवश्यक छैन। म तँलाई कुँद्छु, ताकि तैँले मेरो इच्छाअनुसार आकार र प्रतिरूप लिन सक्। मेरो हृदयलाई गलत प्रकारले नबुझ्; तँ मेरो हृदयप्रति जति सम्‍भव हुन्छ त्यति विचारशील भइस् भने मात्रै यो स्वीकारयोग्य हुनेछ। यदि तैँले अलिकति पनि वास्ता गरिनस् भने, म उपेक्षा गरेर तँबाट फर्किनेछैन। यसलाई विचारै नगरी बेवास्ता नगर्; तँमा मेरो इच्छालाई निरन्तर पूरा हुन दे।
असंख्य सन्तहरू विभिन्न पदहरूमा अवस्थित छन्, त्यसैले, अवश्य तिमीहरू सबैका विभिन्न कार्यहरू छन्। तर मेरो निम्ति साँचो रूपले आफैलाई अर्पण गर्न तिमीहरूले आफ्नो शक्तिले भ्याउने सबै कुरा गर्नुपर्छ; तिमीहरूको कर्तव्य भनेको तिमीहरूले गर्नसक्ने सबै कुरा गर्नु हो। तिमीहरू यसमा वफादार हुनुपर्छ, र खुशीसाथ इच्छुक हुनुपर्छ। तिमीहरू आधा हृदयको हुनु हुँदैन! नत्र भने, तिमीहरूमाथि सधैँ मेरो न्याय आइपर्नेछ; तिमीहरूको देह, आत्मा र प्राणले यसलाई सहन सक्‍नेछैन, अनि तिमीहरूले बिलौना र दाह्रा किटाइ गर्नेछौ।
अघिल्लो: अध्याय ४९
अर्को: अध्याय ५१
परमेश्‍वरको पवित्रता (१)हाम्रो पछिल्लो भेलामा हामीले परमेश्‍वरको अख्तियारको बारेमा थप सङ्‍गति गरेका थियौं। अहिलेलाई हामी परमेश्‍वरको...